Kedu ihe bụ Cap Market? Gịnị Mere O Ji Dị Mkpa? Samoyedcoin
Mgbe ị na-agagharị n'ahịa ọ bụla, ma ọ bụ crypto ma ọ bụ ebuka, enwere echiche ntọala ole na ole onye ọ bụla kwesịrị ịma; otu n'ime ihe kachasị mkpa bụ nnukwu ego ahịa. N'ụzọ dị mwute, ndị ọhụrụ na ahịa na-aghọtahiekarị mmekọrịta dị n'etiti ọnụ ahịa akụ na uru ya, ma ọ bụ ọnụ ahịa ahịa.
N'afọ 2021, nkwupụta nke DOGE, SHIB na "meme mkpụrụ ego" ndị ọzọ juru ndị bịara crypto na-aga $1.00. N'ịbụ akụkụ dị nta nke penny, ọtụtụ kwenyere na nke a bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ha amaghị, nkwa mkpụrụ ego nkịta kacha amasị ha na-aga na $1.00 wee nweta nchekwa ezumike nka n'oge abụghị ihe ezi uche dị na ya dịka a gwara ha. Gịnị kpatara? Otu okwu dị mfe, okpu ahịa.
Na post a, anyị ga-ejegharị gị site na isi ahịa ahịa bụ, otu esi agbakọọ ya, yana ihe kpatara o ji dị mkpa ịghọta uru uru bara uru.
Kedu ihe bụ Cap Market?
Isi n'ahịa ahịa, nke a makwaara dị ka "okpu ahịa," bụ mkpokọta uru nke ihe bara uru. A na-agbakọ ya site n'ịnara ọnụ ahịa dị ugbu a wee mụbaa ya site na ntinye nke akụ na-ekesa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na otu bitcoin ruru $40,000 ma enwere bitcoins 19M na-ekesa, anyị nwere ike nweta mkpokọta ọnụ ahịa bitcoin (okpu ahịa) na-amụba $40,000 site na 19M bitcoins. N'ime nke a, anyị na-enweta okpu ahịa nke $760B.
Gịnị mere Cap Market ji dị mkpa?
Okpu ahịa bụ nlele nke mkpokọta uru dị n'ahịa a na-ere n'ihu ọha. N'ime ihe ndị ọzọ, okpu ahịa nwere ike inye nghọta n'ihe otu ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa kwenyere na akụ ahụ bara uru n'oge ọ bụla. Ọ na-arụkwa ọrụ dị ka osisi nledo bara uru iji tụnyere uru nke otu akụ na nke ọzọ.
Tụlee na otu òkè nke Google bụ $2600 na otu òkè nke Apple bụ $167. Ọ bụrụ n’ịtụle ebuka abụọ a megide ibe ya naanị site n’ịlele ọnụ ahịa òkè ha, mmadụ nwere ike na-arụ ụka na-ezighi ezi na Google bara uru karịa Apple. Ọbụna nke ka njọ, ha nwere ike ịsị na Apple "dị ọnụ ala." Otú ọ dị, mgbe ị na-atụle ọnụahịa nke ngwaahịa ọ bụla na ole mbak dị, ha ga-achọpụta na Apple nwere nnukwu ahịa ahịa buru ibu ma si otú a bara uru karị.
"Ọ bụrụ $1?"
Dị ka e kwuru na mbụ, ịtụ ihe bara uru dabere na ọnụ ahịa ya nwere ike iduhie ma ghara igosipụta ezi uru ọ bara. Ma n'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-aga n'ihu na-emehie a. Ọbụna nke ka njọ, ụfọdụ na-ama ụma na-erite uru nke ndị na-amaghị ihe na-ekwe ha nkwa cryptoasset "mooning" n'otu ntabi anya.
Ka anyị leba anya na DOGE, SHIB, na SAMO. Ọ bụrụ na anyị achịkọta cryptoassets ndị a n'akụkụ n'akụkụ, anyị ga-ahụ ụfọdụ isi ihe dị iche na nke ọ bụla mkpụrụ ego ike iru niile-kwa-nkwa price nke $1.
Malite na SAMO, ihe na-ekesa ugbu a, ma ọ bụ mkpụrụ ego niile dị maka ndị sonyere n'ahịa, bụ 3.25B SAMO. Nke a tụnyere DOGE na SHIB na-ekesa 133B DOGE na 549T SHIB, n'otu n'otu. Iji nweta okpu ahịa nke mkpụrụ ego nkịta ọ bụla, anyị na-atụgharị ọnụ ọgụgụ ndị a site na ọnụ ahịa ha ugbu a.
N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ na ọnụ ahịa ahịa nke SAMO bụ akụkụ dị nta nke DOGE na SHIB. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana anyị nwere ike ịhụ na n'agbanyeghị ọdịiche dị na ọnụahịa dị n'etiti DOGE na SHIB, ha anaghị adị iche na okpu ahịa.
N'ịweta ihe otu nzọụkwụ n'ihu, anyị nwere ike gbakọọ ọnụ ahịa ahịa nke mkpụrụ ego nkịta ọ bụla ga-enwe na $1 nke ọ bụla.
Ọnụ ahịa ahịa pụtara na $1.00 kwa mkpụrụ ego:
Ọbụlagodi na $1 SAMO, okpu ahịa ka bụ akụkụ dị nta nke DOGE na SHIB dị ugbu a okpu ahịa. Agbanyeghị, $1 DOGE dabara na okpu ahịa buru ibu karịa PayPal processor ịkwụ ụgwọ ụwa. Na Global Equity Market bara uru na $125T, $1 SHIB ga-apụta na ọnụ ahịa ahịa ya dị okpukpu 4.3 karịa ngwaahịa ọha na eze niile dị. Ọ baghị uru ikwu, ọ dị mkpa ịtụle okpu ahịa nke akụrụngwa mgbe ị na-eme mkpebi ọ bụla dabere na atụmanya nke ọkwa ọnụahịa ga-eru.
Okpu ahịa agbasara nke ọma
Dị ka ọdabara dị ka n'ịtụle ope ahịa ihe onwunwe nwere ike ịdị, ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-agụta ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ego ga-adị. Nke a bụ n'ihi na ọnụ ahịa ahịa na-akwụ ụgwọ naanị maka ikesa ọkọnọ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ego dị ugbu a. Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ego ga-adị adị (kachasị mma), anyị nwere ike ịtụgharị na okpu ahịa agbazere nke ọma.
Ịnọnyere ihe atụ mkpụrụ ego nkịta anyị, anyị ga-achọpụta na DOGE nwere ihe na-akparaghị ókè ugbu a. Ya bụ, a na-egwupụta DOGE ọhụrụ kwa ụbọchị, a ga-anọgidekwa na-egwupụta ya ruo mgbe ebighị ebi. Yabụ na ụbọchị ọ bụla na-agafe, ọ na-esiwanye ike karịa DOGE ịkụ $1. Ka ọ dị ugbu a, ihe dị ukwuu nke SHIB bụ 590T, na SAMO max ọkọnọ bụ 4.75B.
Okpu ahịa agbasara nke ọma:
Rịba ama na n'ihi na a na-egwupụta DOGE ọhụrụ kwa ụbọchị, okpu ahịa agbazere n'ụzọ zuru ezu ga-adaba na okpu ahịa. Mana maka SAMO na SHIB, a ga-enwe ọdịiche dị n'etiti okpu ahịa na okpu ahịa agbazere nke ọma ruo mgbe mkpụrụ ego ha niile ga-abanye na mgbasa ozi. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị a abụghị ihe dị iche iche ma e jiri ya tụnyere okpu ahịa, ha nwere ike ịbụ maka cryptoassets ndị ọzọ.
N'ihi nke a, ọ dịkwa mma ịtụle ka okpu ahịa cryptoasset si atụnyere okpu ahịa ya gbazere n'ụzọ zuru ezu wee kwuo ọdịiche. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile, ka ọdịiche ahụ dị ukwuu, ka nrụgide dị ala nwere ike ịnweta ka ihe ọhụrụ na-abanye n'ahịa.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, price abụghị ihe niile. Ọzọkwa, ị kwesịrị ịhụ ugbu a ka aghọtaghị mkpa okpu ahịa ihe bara uru nwere ike isi mee ka ụfọdụ kwenye nkwuputa na-enweghị isi. Ya mere, oge ọzọ ị na-enyocha ihe bara uru na-adabere na mkpebi gị na ọnụahịa na-akụda otu ọkwa, dị ka $1.00, tụlee okpu ahịa nke akụ, na-ekesa nnyefe, na max ọkọnọ tupu ikpebi ma ọnụahịa ebumnuche ọ bụ ihe ezi uche dị na ya.